Sawirro: Puntland oo casuumtay 13 jir fariid ah!! | Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Puntland oo casuumtay 13 jir fariid ah!!
Sawirro: Puntland oo casuumtay 13 jir fariid ah!!
Garowe (Caasimada Online) – Madaxweynaha maamulka Puntland C/welli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta xafiiskiisa magaalada Garowe ku qaabilay wiil yar oo 13 sano jir ah kaasi oo ku dhashay magaalada Buuhoodle , isaga oo sameeyay diyaarad iyo agab kale oo caag uu ka sameeyay.
Guuleed Aadan Cabdi waa wiil da’yar oo jira 13-sanno oo dhigta fasalka saddexaad ee dugsiga, waxa uu ku dhashay Degmada Buuhoodle ee Xarunta Gobolka Cayn halkaas oo uu wax-barashadiisa kasii wato.
Guuleed waxaa uu Madaxweynaha, Madaxweyne ku-xigeenka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka hortooda kusoo bandhigay gawaari, iyo Diyaarado uu isagu soo saaray oo maskaxdiisa ka keenay, Gawaarida ayaa isugu jira nooca Xammuulka qaada ee loo yaqaan Waaraadka, Bajaaj, Iska-rogada ciidda iyo dhagaxa gurta, iyo Diyaarad.
Sidoo kale gaadiidkan uu guuleed sameeyey waxaa u dhammaystirnaa dhammaan agabkii looga baahnaa hadday ahaan lahayd Taayirada, kuraastii,layrarkii, dhigihii alaabta lagu xirilaha, Hoonkii, iyo dhammaan wixii uu gaari u baahnaa.